पढेको हुबहु कुरा दिमागमा सम्झिन यो तरिका अपनाउनुहोस् - Gaule Media ::
Home/रोचक/पढेको हुबहु कुरा दिमागमा सम्झिन यो तरिका अपनाउनुहोस्
कुनैपनि परिक्षामा फेल हुने चान्स छैन !
Gaule Media२ माघ २०७५, बुधबार १५:३८
धोत्लिएर रातो दिन पढ्नुहुन्छ ? जति घोटेर पढ्यो बिर्सि हालिन्छ । परिक्षाका बेला भुलिहाल्छ ।
पढेको कुरा सम्झनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा उन्नति गर्न तपाईं कसरी मदत पाउन सक्नुहुन्छरु पढेको कुरामा चासो दियौं र पढेको कुरा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौं भने मदत पाउन सक्नुहुन्छ। पूरा ध्यान दिन जे पढ्दैछौं त्यसमा गहिरो चासो लिनै पर्छ। पढ्ने बेला तपाईंको ध्यान अन्तै छ भने पढेको कुरा याद गर्न सक्नुहुन्न। आफूलाई थाह भएका कुरासित अहिले पाएको जानकारी दाँज्दा पनि तपाईंको ज्ञान बढ्नेछ।
२. अन्डरलाइन गरेर पढ्ने
३. आफ्नो नोट आफैँ बनाउने
धेरैले परीक्षा आउने बेला साथीभाइसँग नोट मागेर पढ्ने गर्छन् । आफैँले नोट बनाउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । शिक्षकले भनेको केही प्वाइन्टको प्रयोग गर्ने र आफ्नै भाषामा नोट बनाउने विधि सजिलो हो । आफूले लेखेको कुरा प्रायः बिर्सिइन्न ।पढेको कुरा सम्झनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा उन्नति गर्न तपाईं कसरी मदत पाउन सक्नुहुन्छरु पढेको कुरामा चासो दियौं र पढेको कुरा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौं भने मदत पाउन सक्नुहुन्छ। पूरा ध्यान दिन जे पढ्दैछौं त्यसमा गहिरो चासो लिनै पर्छ। पढ्ने बेला तपाईंको ध्यान अन्तै छ भने पढेको कुरा याद गर्न सक्नुहुन्न। आफूलाई थाह भएका कुरासित अहिले पाएको जानकारी दाँज्दा पनि तपाईंको ज्ञान बढ्नेछ।
६. महत्त्वपूर्ण कुराहरू मनन गर्नुहोस् स्
पढेको कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु र अरूलाई त्यो बताउनुका साथै ती महत्त्वपूर्ण कुरामा मनन गर्नु फाइदाजनक छ भन्ने तपाईंले थाह पाउनुहुन्छ।
७. प्रयोगात्मकमा ध्यान दिने
साथीहरुबीच प्रश्नोत्तर गरेर पढ्दा जति फाइदा अरूमा हुन्न ।सानो टिम बनाउनुस्, फर्मुला, पाइन्ट, परिभाषा आदिबारे एकअर्कासँग सोध्नुस्, त्यसो गर्दा आफूलाई के आउँछ, आउँदैन भन्नेबारे जानकार भइन्छ । आफ्नो कमी कमजोरी भएको विषयमा थप मिहिनेत गर्न सहज हुन्छ ।पढेको कुरा सम्झनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा उन्नति गर्न तपाईं कसरी मदत पाउन सक्नुहुन्छरु पढेको कुरामा चासो दियौं र पढेको कुरा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौं भने मदत पाउन सक्नुहुन्छ। पूरा ध्यान दिन जे पढ्दैछौं त्यसमा गहिरो चासो लिनै पर्छ। पढ्ने बेला तपाईंको ध्यान अन्तै छ भने पढेको कुरा याद गर्न सक्नुहुन्न। आफूलाई थाह भएका कुरासित अहिले पाएको जानकारी दाँज्दा पनि तपाईंको ज्ञान बढ्नेछ।
धेरैजसो पढाइमा टप गरेका व्यक्तिको पढाई शैली हेर्दा उनीहरूले चार्ट बनाएर पढ्ने गरेको देखिन्छ । जस्तै करबारे पढ्दै हुनुहुन्छ भने करको परिभाषाका प्रकारलाई चार्ट बनाएर पढ्दा सहजै सम्झन सकिन्छ ।